कृष्ण र रुपाले डष्टबिनमा भेटिएका बच्चालाई छोरा बनाए ! सबैले शेयर गरौं (भिडियो हेर्नुहोस) - Daily Gorkhali
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/कृष्ण र रुपाले डष्टबिनमा भेटिएका बच्चालाई छोरा बनाए ! सबैले शेयर गरौं (भिडियो हेर्नुहोस)
एउटा सुन्दर घर नेपाल स्नेही काखमा आज तपाईहरुकै प्रिय कृष्ण वलि र रुपा पुलामी मगर वलि पुगे । सबैको साथ र सहयोगले खुशी हुन थालेका कृष्ण र रुपा त्यहां रहेका मनरोगी दिदी बहिनीहरु र अशाहय बालबालिकाहरुका लागि सहयोग बुझाउन र दुख सुख साट्न पुगेका थिए ।
नेपाल स्नेही काखकी आमा श्रीनेहा पोख्रेलले कृष्ण र रुपासंगै हामीलाई पनि आत्मिय स्वागत गर्नुभयो । बिविध समस्या र अप्ठ्याराहरुमा चलिरहेको नेपाल स्नेही काखमा हाम्रा अघिल्ला भिडियोहरुको प्रभावले केहि सहजता देखिन थाल्दैछ ।
सहयोगीहरुसमय समयमा सहयोग गर्न आईपुग्छन्, यद्यपी स्नेही काखका लागि आफ्नै जग्गामा मनरोगी दिदी बहिनीहरु र अशाहय बालबालिकाहरुका लागि बासस्थानबनाउनु कठिन बनिरहेको छ । सहयोगीहातहरुले साथ दिए यो काम सम्भव छ ।
स्नेही काखमा पुग्ने बित्तिकै रुपा वलि भविष्यलाई माया व्यक्त गर्न थालिन् । भविष्यलाई बिर्सनु भएको छैन नि । पशुपति क्षेत्रमा केहि समय अगाडि फोहरको डस्टबिनमा भेटिएका प्यारो बालक, भविष्य । जस्लाई हामीले पनि बार्षिक २४ हजार सहयोग दिने निर्णय गर्दै अघिल्लो बर्षका लागि २४ हजार सहयोग बुझाईसक्यौं । रुपासंगै कृष्णले पनि भविष्यप्रति ठुलो माया व्यक्त गरे । मिल्थ्यो भने भविष्यलाई छोरा बनाएर पाल्थ्यौं भने ।
तर के गर्नु नेपाल स्नेही काखको संरक्षणमा पगिसकेका भविष्यलाई रुपा र कृष्णले एडप्ट गर्न नमिल्ने रहेछ । समय समयमा भविष्य लगायत स्नेही काखकाअन्य बाल बालिका र दिदी बहिनीलाई भेट्न आउने बाचा गर्दै रुपा र कृष्णले भविष्यलाई आफ्नै छोरा स्विकार गरे ।
कतारबाट मनकारी शाजाद हुसेनसंगै थन ब. खड्का प्रविन, यु.एस.ए बाट प्रशान्त थापा र दुर्गा थापासंगै कुमारी दिदी जो पाल्पाको हुनुहुन्छ तर यतिबेला साउदीमा हुनुहुन्छ उहांहरुले पठाउनु भएको १ लाख २० हजार सहयोग रकम रुपाको हातबाट स्नेही काखको संरक्षणमा रहनु भएकी एक मनोरोगी दिदीको हातमा हस्तान्तरण गरेयौं ।
सहयोग बुझाईसकेपछि रुपाले फेरी भविष्यलाई लिईन् र माया व्यक्त गर्न थालिन् । दर्शकबृन्द, हाम्रो भिडियो पुरा हेरेर हामीले गर्ने सामाजिक कामहरुमा तपाई पनि सामेल हुन सक्नुहुनेछ । आउनुहोस पुरा भिडियो हेरौं ।